Lesona 6: Lesona hafa avy amin'Ilay Mpampianatra lehibe
Vakio ny Gen. 3:1-11. Nahoana Andriamanitra no nanontany an'i Adama hoe: "Aiza moa hianao?"?
Ny fitantarana mahazatra ny amin'ny Fahalavoana dia milaza fa paoma ilay voankazo voarara. Kanefa tsy izany no voasoratra ao amin'ny Baiboly. "Voan'ny hazo"-Gen. 3:3 no ilazany azy. Tsy zava-dehibe ny fahafantarana ny karazan'ilay voankazo. Norarana ny fihinanana ny voan'io hazo io satria manana ny antom-pisiany ilay hazo. Teo io hazo io ho fizahan-toetra ny olona raha hanilika an'Andriamanitra izy ka hanao hoe: "haiko ny mitondra ny fiainako, izaho ihany no mahalala izay tokony hataoko, izaho no andriamanitry ny tenako".
Ary marina tokoa fa rehefa voataonan'ny menarana i Adama sy i Eva ka nihinana ny voan'ilay hazo, dia nibirioka ho amin'ny lalan-tsy izy ny fiainan'izy ireo. Ary rehefa ren'izy ireo fa nanakaiky azy Andriamanitra, dia niezaka niafina "tao anaty hazo tao amin'ny saha" - Gen. 3:8 izy.
Hafahafa tokoa ny fanontanian'Andriamanitra an'i Adama hoe: "Aiza moa hianao?" Azo antoka fa fantatr'Andriamanitra tsara ny toerana nisy azy. Inoana fa nametraka izany fanontaniana izany Andriamanitra mba hananan'i Adama sy i Eva fahatsapana lalina ny arnin'izao zavatra ataony izao - niafina izy ireo - izay vokatry ny nataony ihany. Izany hoe nanampy azy ireo Izy hahita ny vokatry ny zavatra nataony, izay vokatra mampalahelo.
Vakio ny Rom. 5:11 -1 9, izay ampifandraisan'i Paoly mivantana, imbetsaka, ny zavatra nataon'i Adama tao Edena sy ny zavatra nataon'i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana. Inona no tokony hambaran'izany amintsika mikasika ny nanarenan'i Jesôsy ny tsy nety nataon'i Adama?
Azo lazaina fa ny drafi-panavotana no nasetrin'Andriamanitra ny fihetsika nasehon'i Adama sy i Eva. Niafina an'Andriamanitra izy ireo noho ny henatra sy ny fahatsapan-tena ho meloka nateraky ny fahotany, saingy tonga namonjy azy Andriamanitra. Efa mba tahaka izany koa isika ary efa tonga namonjy antsika i Jesôsy. Noho izany dia azo apetraka, amintsika koa ilay fanontaniana hoe "Aiza moa hianao?" Izany hoe: manao ahoana ny toerana misy anao, ny amin'ny fahotanao sy ny fahamelohanao, ary ny fifandraisanao amin'i Jesôsy, eo anatrehan'ny zavatra nataony mba hanavotana anao ho afaka amin'izany?
Na inona na inona ampitaina ao amin'ny fanabeazana kristianina, nahoana no tsy maintsy hazavaina tsara ao fa efa toetsika mihitsy ny miafina an'Andriamanitra, ary i Jesôsy no vahaolana amin'izany?